डा. कार्कीको ज्यानमार्ने कारखाना : पाठेघर जँचाउन गएकी महिला लास बनेर फर्किन् - Social Video Khabar
डा. कार्कीको ज्यानमार्ने कारखाना : पाठेघर जँचाउन गएकी महिला लास बनेर फर्किन्
बिराट नर्सिङ होमका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की उपचारका क्रममा सर्वसाधारणको मृत्यु प्रकरणमा पहिलो पटक विवादमा आएको नाम होइन ।
उनी सञ्चालक रहेको नर्सिङ होममा पटक–पटक बिमारीका गलत उपचार मात्र गराइएका छैनन्, बिरामीको मृत्यु भएपछि कयन पटक मिलापत्र गराएर आफ्नो कारखाना चलाइरहेका छन् ।
गाइनोलोजिस्टका रुपमा परिचित कार्कीको नर्सिङ होममा साधारण बिमारी भएर पुगेका महिलाको नर्मल उपचारमा नै मृत्यु हुने गरेको छ ।
यो शिलशीला केही दिन अघि पनि चल्यो । दुहवी नगरपालिका–८ की रमिला कार्की घिमिरेको नवजात शिशुसहितको मृत्युप्रकरणका कारण ।
पहुँच र रकमका आधारमा प्रशासनदेखि राजनीतिक तहसम्म पहुँच बनाएका कार्कीले जालझेलमा मेडिकल कलेजको लाइसेन्स लिएर अहिले बिराट मेडिकल कलेज पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर, बिमारी आश्वस्त पार्नुको साटो अझ आतंकित हुनेगरी उनको उपचारको शिलशीला चलिरहेको छ ।
पाठेघरमा समस्या देखिएकी मोरङ जिल्ला सुन्दरहरैचा नगरपालिका–१ की ३८ वर्षीय चेलीमाया प्रसाईको गलत उपचारका कारण मृत्यु भएको थियो । चेलीमायाको अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको थियो । शल्यक्रियापछि सामान्य वार्डमा उपचार हुने क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो ।
आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए । झापाको गौरदह माइतीघरबाट उनी सल्लाह लिनकै लागि अस्पताल पुगेकी थिइन् । उनलाई पाठेघर सफा गर्न चिकित्सकले सल्लाह दिएका थिए । पाठेघर सफा गर्न मञ्जुर भएपछि उनको अप्रेशन (पाठेघर सफा) गरिएको थियो । शल्यक्रियाको करिब २८ घण्टापछि उनको मृत्यु भएको थियो ।
सामान्य अवस्थाको मानिसको मृत्यु के कारणले भयो भनेर अस्पतालले आफन्तलाई जवाफ नै दिन नसकेको पीडित पक्षको आरोप थियो । त्यसबेला डाक्टरहरूले इन्फेक्शन भएको भनी बताए । मिलापत्र गराएर मुद्दालाई रफ्फा दफ्फा गराइयो ।
चिकित्सकको लापरबाहीले प्रसाईको मृत्यु भएको भन्दै प्रर्दशनमा उत्रिएका पीडित पक्षका ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर बिहान अस्पताल प्रशासन र पीडित पक्षबीच सहमति भएपछी उनीहरु छुटेका थिए ।
Prevनेपाल गएको साउदीले नेपाली केटी मनपराएर उसको बाउ आमा संग केटीको हात मग्न गएपछी भयो बब्बाल
Nextयी युबतिको माछा मार्ने तरिका हेर्नुहोस तिन छक्क पर्नुहुनेछ
अरब पुगेका केही नेपाली चेलिहरुको यस्तो हालतमा फेरी भीडीयो बाहीरीइयो। पुरा हेर्नुहोस।
फटाहा लोग्ने स्वास्नी कज्याउन पाएपछी अरु के चाहियो यी लोग्नेका जात लाई
पुक्क मोटो पेट नदेखिने, अग्लो देखिने गरि सारी लगाउने अचम्मको तरिका..भिडियोमा हेर्नुहोस र सिक्नुहोस
कसैको नहोस यस्ती बुहारी – मन छुने नेपाली भिडियो हेरेर तपाइको आसु झर्ने छ